Qabsashadii SNM ee Soomaalilaan 1991-kii, W/Q: Cali Cabdi Coomay | Wadamagoo News
Qabsashadii SNM ee Soomaalilaan 1991-kii, W/Q: Cali Cabdi Coomay
July 26, 2016 - Written by Adan Abdulaahi
Hadalkii Cumar Carte Qaalib
Ciidankii Maxamed Siyaad Barre(MSBarre) oo markii horeba ay naafeeyeen jabhadii SNM oo aan niyad ku dagaalamayn, Markii la soo gaadhay bishii Janaweri ee sannadkii 1991-kii ayuu Rasal-waraarihii xukuumadii Cali Mahdi Maxmed ee Jabuuti lagu soo dhisay Cumar Carte Qaalib soo saaray hadal kooban oo ku waajahan hadhagii ciidankii M.S.Barre, kaasoo ahaa” dhammaan ciidamada dawladda ee jooga waqooyi(Somaliland) waa inay isu dhiibaan jabhadii SNM, kuwa jooga gobolada dhexe iyo agagaarka Banaadirna waa inay isu dhiibaan jabhaddii USC, kuwa jooga Bay iyo Jubbooyinkuna waa inay isu dhiibaan jabhaddii SPM.”
Hadalkan Raysal wasaare Cumar Carte Qaalib wuxuu soo baxay 31-kii Janeware ee 1991-kii, markii hadalkani soo baxay ayuu aragax iyo niyadjab weyni ku habsaday ciidankii M.S.Barre ee ku sugnaa gobolada waqooyi(Somaliland) taasina waxay ku keentay inay guuto kastaa u jeesato halkii ku toosnayd.
Ciidankii Hargaysa Joogay Halkay tageen?
Ciidankaii Hargaysa deganaa ee MSBarre ayaa si qarboqarbo ay ugu kolonyeystay laba jiho oo kala ahaa: Boorama iyo dhinacaa Jabuuti, iyagoo wata gaadiid dagaal iyo ciidamo lug ah ayay u jihaysteen labadaa meelood. Ciidaankii SNM oo dhinaca galbeedka waxay jidgoyn ugu jireen tuulada Caabudla, laakiin intii ay isku urursanayeen Qudhaca aburiin ayay badankoodi ka gudbiin laamiga oo ay gaadheen Boorama ilaa xeebta dhinaca Jabuuti.
Badh ka mid ah ciidanka oo qulqulaya laamiga caabudla ayay koox SNM ahi weerar kedis ah ku qaadaan, dagaal kooban oo khasaare badan ayaa goobtaa ka dhacay. Jidgoyn kale ayaa ku heshay agagaarka magaalada Arabsiyo waxaana ka dhashay khasaaro badan, aakhirkiina waxay gaadheen Tuulada Dila oo badhkood difaac ka galeen qaar kalena u dhaafeen dhinaca xeebta.
Qabsashaddii SNM ee Hargaysa
2-dii bishii Febarwari ee sannadkii 1991-kii cabbaaro 5:00 galabnimo ayay ciidankii SNM ee aagga galbeedk soo galen Hargaysa ciidankani wuxuu ahaa 31-aad, ka dib waxay gudaha u soo galeen magaalada oo haawanaysa. Gawaadhidii ciidanka iyo tiknikadii ayaa lagu rakibay sameeco waaweyn kuwaasi oo loogu baaqayo dadkii magaalda deganaa ee taageersanaa taliskii MSBarre inaanay ka soo bixin guryohooda, nabadgeliyo iyo inaan la’layn doonin ayaa loogu baaqay. Qaar ka mid sameecadaha gawaadhida saarnaa waxa ka baxayay heesihii waddaniga ahaa ee “ waabaa baryey, bilicsan arooryo baxsan, maalin boqran”. Dadkan magaalada Hargaysa deganaa waxay ahaayeen qoxoontiyadii deganaa xeryaha ku dhawaa deegaanka Hargays oo wakhtigii dagaalka toos ula safnaa taliskii MSBarre, waxay laga dhaadhiciyay inay dhulka iyo guryaha laga saaro taageerayaasha SNM iyaga lagu wareejin doono, taasi bedelkeedana ay hubka qaataan oo ay dagaalka dhinacooda ka galaan, balse dadkaasi intooda badan lagama aargoosan, marka laga reebo kuwii dagaalka ku jiray, oo la soo ururiyay ka dibna la toogtay. Intoodii badnayd waa la saamaxay.
Dagaalkii Deegaanka Dila
Qayb ka mid ciidankii MSBarre ee ka soo baxay Hargaysa oo uu watay Siyaad Daa’uud ayaa difaac ka galay tuulada Dila oo Hargaysa kaga beegan galbeed, kuna taala jidka loo maro Boorama. Ciidanka oo wata hub culus ayaa halkaasi difaac ka soo galay oo ay kaga hortagayaan ciidankii SNM inaanay qabsan deegaanka galbeedka ee gobolka Awdal iyo dhinaca xeebta Jabuuti xigta.
Qaybtii 31-aad ee ciidankii SNM oo uu taliye qaybeed u ahaa Haybe Cumar Magan ayaa u dhaqaaqay dhinaca gobolka Awdal si ay uga siyeeyaan hadhaagii ciidankii MSBarre eek u sugnaa gobolka Awdal guud ahaan, si ay uga soo reebaan hubkii iyo saanadii ay kala baxeen Hargaysa iyo gabiley. Intii u dhexaysay 6 ilaa 8-dii bishii Febawari ee sannadkii 1991-kii ayay u dhaqaaqeen tuulada Dila ee difaaca xoogani yaalay. Dagaal qadhaadh ayaa tuulada Dila ku dhexmaray hadhagii ciidankii MSBarre iyo ciidankii SNM, markii dagaalku socday maalin dhan ayay ciidankii SNM jiidheen difaacii Dila, waxaana tuulada ka dhacay dagaal aan waxba la isula-hadhin, halkaasina waxa cagta lagu mariyey difaacii tuulada iyo hadhaagii ciidankii MSBarre.
Meydka wadhnaa tuulada Dila lama soo koobin karayn, ciidankii SNM ee qabsaday Dila ayaa si nabad ah kula wareegay magaalada Booram iyo deegaankaasi ilaa xeebta Jabuuti xigta. Ka dib waxa ku soo biiray ciidan uu hogaaminayo C/laahi Xuseen Iimaan” Dirwal” oo hadhagii ciidankaii MSBarre kula dagaalamay Saylac iyo Lawyocado, aakhirkiina ka taalabiyay xuduuda Jabuuti ay la wadaagto Somaliland, halkaasina ay ku weydiisteen maganeliyo siyaasadeed. Dhammaan magaalooyinkii kale ee Somaliland sida, Burco, Berber, Ceerigaabo,Gabiley, Laascaanood iyo Buuhoodle si nabadgeliyo ah ayay kula wareegeen, oo ciidankii MSBarre waxay u yaaceen dhinacaa iyo Puntland ilaa Muqdisho.